La dagaalanka Aragtida Keligi Talisnimada ee Qoraalka Fahad Yaasin Xambaarsan yahay. - XAL DOON
Home NEWS La dagaalanka Aragtida Keligi Talisnimada ee Qoraalka Fahad Yaasin Xambaarsan yahay.
Dad badan ee aan ku jiro waa ku adkaatay inay rumeystaan qoraalka lama filaanka ah ee ku soo baxay magaca Fahad Yaasin Xaaji Daahir, La Taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha sharcidarrada ah Maxamed Cabdullahi Farmajo, kuna saabsan dib u dhiska Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), laguna shaaciyay Baraha Bulshada shakhsiyaado gaar ah. Saddex sababood ayaa dhaliyay shakiga:
1. Kala garasho la’aanta nooca qoraalka inuu yahay mid lagu qoray xil dowladeed iyo mid lagu qoray mas’uuliyad shakhsiyadeed.
2. Habka Faafinta qoraalka oo aan waafaqsaneyn habraaca faafinta qoraal qof mas’uul ah qoray sida La-Taliyaha Amniga Qaranka oo aan lagu faafin Warbaahinta Madaxtooyada, Bar Bulsho gaar u leeyahay Fahad, iyo warbaahinta iyo webside-yada la aaminsan yahay.
3. Shantii sano (5) sano ee la soo dhaafay lama arag qoraal iyo muuqaal, iyo maqal uu leeyahay Fahad Yaasin oo la aaminsan yahay inuu yahay Milkiilaha Dowladda Federalka, taaso xilal sare ka qabtay sida Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada, Agaasimaha Guud ee NISA, La Taliyaha Amniga Qaranka ee uu hadda yahay. Halka mar ee la arkay qoraal Fahad Yaasin waxay aheyd warqad amar diido iyo is hortaag baarista kiiska sarkaalad ka tirsan NISA Ikram Tahlil Faarax oo geeri iyo nolol lagu la’yahay, warqaddaasu ku socotay Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Xilgaarsinta Inj. Maxamed Xussein Roble. Waxaa Xilka looga qaaday Kiiska Ikram oo weli taagan.
Faallo lagu qoray bogga Internedka ee laanta BBC Af Soomaaliga ayaa igu qanciyay in qoraalka dhab yahay. Waxaa la tuhunsan yahay in qoraalka looga jawaabayo wareysi Abdisatar Xassan Cali oo horey uga soo shaqeeyay Safaaradda Soomaaliya ee Kenya siiyay Barta Hanoolaato, kuna sheegay tacadiyo iyo fadeexooyin hay’adda NISA ku lug leedahay.
Waxyaabaha macnodarrada iyo beenta ah ee ku qoran qoraalka waxaa ka mid ah:
* Wiil iyo Hooyadiis oo NISA dhexdeeda isku ogaaday;
*Ciidammo dhar cad ah ee NISA ku soo biiray. Ciidammada Sirdoonka waa dhar cad.
*Sarkaal NISA ka tirsan oo guursaday Haweeney AL Shahab ka tirsan, kaddibna dabagal lagu sameeyay, la soo qabtay 12 qofood ee Haweyneyda la shaqeynayay.
*Hoos u dhaca tirada faldambiyeedyada bishii oo ahaa 85, hoos ugu dhacay 9 fal dambi;
*IIaalinta qabka (Is la weynida ) Soomaalida, lana diiday, faragelinta, talada, taagerada, iyo tababarrada dalalka Shisheeyaha;
*Tababarka iyo qalabeynta Ciidammada NISA qaabilsan la dagaalanka Argagixisada.
* Ammaanta iyo Hilowga dib u soo nooleynta hay’addii NSS ee Dowladdi Kacaanka 21 Oktoobar.
*Ammaanta “fogaan araga hogaamiyaha dalka,” Farmajo oo rafiiq iyo wadaay la ah Ciidammada Qalabka Sida, gaar ahaan haga howlaha NISA.
*Booqashada Madax ka socotay hay’adaha Sirdoonka dalal kale oo soo booqday AG NISA Fahad Yaasin.
Xaqiiqada waxay tahay in NISA ku fashilantay xilgudashadeeda, waayo waxaa laga dheregsan yahay xaaladda amni darro iyo dagaallo sokeeye ee ka taagan dalka, taaso kalliftay in muddada joogitaanka AMISOM lagu kordhiyo shan (5) kale. Waxaa Gudaha iyo dibedda Soomaaliya laga wada og yahay in Fahad Yaasin uu boqol boqolkiisa mashquul ku ahaa siyaasadda, taaso ka soo horjeeday xilkiisa qaran. Sida darted, NISA waa hay’ad sharcidarro ah, waajibkana yahay in la baabi’iyo si deg deg ah, si loo dhiso hay’ad waafaqsan dastuurka kmg iyo sharci ku dhisan mabaadi’da dimoqradiga ah.
Waa jaahwareerin iyo sheeko xariir in Fahad Yaasin ku andacoodo inuu diiday, ku gacan seyray tababarrada, talooyinka, iyo taagerada hay’adaha sirdoonak dalalka horumaray, isla markaana uu ku faano in dalal ajnabi ah ka codsadeen tababarro dhinaca argagixisada, sheegashadaasoo ka horjeeda xaqiiqada shacabka aaminsan yahay oo ah, ” Wallee labo Shabab waa wada shaqeeyaan,” taaso loola jeedo in Dowladda Federaalka iyo Shabab isku milmeen.
Fahad Yaasin kama hadlin khiyaanada qaran ee aan qarsoodiga aheyn ee asaga lagu eedeynayo oo ah inuu u adeego Sirdoonka Qatar, Ethiopia, Eritrea, iyo Mareykanka.
Qoraalka lagu dhirrigelinayo soo nooleynta tacadiyadii iyo xadgudubyadii hay’addii nabadsugidda kacaanka 21 Oktoobar (NSS) wuxuu gelinaya welwel muwaadin kasta oo danta dadka iyo dalka ka naxaya labo sababood:
1. Kaalinta Fahad Yaasin uga jiro dowladda federaalka shantii (5) sano ee la soo dhaafay iyo afkaaraha, dhaqanka, iyo isbeddellada uu horseedka ka yahay, kuwaaso ka soo horjeeda dastuurka kmg iyo nidaamka JFS.
2. Halista ka imaaneysa mas’uul u xilsaaran Amniga Qaranka ee aan aaminsaneyn, akhrin, rabin ku dhaqanka dastuurka kmg, nidaamka dimoqradiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ku dhisan tahay.
Waa dhab in mas’uulkii guta xilkiisa qaran si waafaqsan dastuurka iyo sharciga dalka uu kasbanayo taagerada iyo xusuusta wanaagsan ee Shacabka Soomaliyeed. Hase yeeshe, qoraalka Fahad Yaasin waa qiraal si rasmi ah u caddeynaya inuusan aaminsaneyn, akhrin, dhawreyn dastuurka kmg, gaar ahaan qodobka afaraad (4) ee ku saabsan sarreynta dastuurka, qodobbada ku saabsan mabaadi’da guud ee xuquuqda aadanaha, xuquuqda iyo xorriyada muwaadinka Soomaaliyeed, kala soocidda mas’uuliyadda iyo awoodaha hay’adaha dowladda Federaalka -sharcidejinta, fulinta, iyo garsoorka – iyo is ilaalintooda iyo la xisaabtankooda, aqoonsaneyn in NISA ka tirsan tahay, hoos timaado Laanta Fulinta, xadka xilka iyo awoodaha Madaxweynaha JFS, baahsanaanta awoodaha dowladda federaalka iyo wada shaqeynta heerarka dowladda federaalka, qodobka 111H ee ku saabsan Guddiga Ammaanka Qaranka, qodobbada ku saabsan nabadda iyo amniga dalka (126 -131), gaar ahaan qodobka 126 (1,2,3, 4, 5,6) iyo qodobka 127 oo caddeynaya in Ciidammada Qalabka Sida ay dhawrayaan “Talinta Sharciga, hay’adaha dimoqradiga ah iyo xuquuqda asaasiga ah,” ee aysan u hoggansameyn Madaxweynaha kursiga fadhiya,.
Fahad Yaasin wuxuu ka baaqsaday fulinta mas’uuliyadda ka saarneyd, welina ka saaran qodobbada dastuurka kala ah 130 ee ku saabsan dhammeystirka Sharciga hay’adaha Amniga, lagu xoojiyay Jadwalka D (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) oo dhammaantood ku wada saabsan dhammeystirka sharciyada mudnaanta leh ee lagu hirgelinayo qodobka 130, kuwaaso la rabay in la dhammeystiro sannadka 2017.
Ma jiro xiriir amar ka qaadasho iyo maamul ee ka dhexeeya Madaxweynaha JFS iyo Ciidammada Qalabka Sida, mana jirto sabab Farmajo rafiiq iyo wadaay ugu noqdo Ciidammada Qalabka Sida. Waajibka Madaxweynaha waa inuu noqdaa rafiiqa iyo wadaayka dastuurka kmg iyo habsami socodiinta howlaha Qaranka oo hay’adaha kala duwan loo xilsaaran yihiin. Waqtiga la marayo waxaa dalka mas’uul ka ah Xukuumadda Xilgaarsiinta, waana in loo hoggansamo qodobka 103.
Fahad Yaasin ma garan ama waa iska indhatiray qodobka 90 ee ku saabsan xilka iyo awoodaha Madaxweynaha JFS, gaar ahaan xarfaha A, C. Qodobka 90 (B) ee ku saabsan in Madaxweynaha JFS yahay Taliyaha Ciidammada Qalabka Sida wuxuu la mid yahay qodobka 87 (1, A) ee dhigaya in Madaxwweynaha yahay Madaxa JFS, taaso machnaheedu aheyn in Madaxweyne Farmajo yahay Aabaha, Macallinka Ummadda Soomaaliyeed ama asaga laga amar qaadanayo. Qodobka 90 (B) waxaa ku xiga qodobka 90 (C) oo dhigaya in Madaxweynaha Magacaabayo Taliyayaasha Ciidammada Qalabka Sida Heerka Federaalka iyo ka qaadista xilkooda , markii ay soo jeediyeen Golaha Wasiirrada. Magacaabid, dallacadd, iyo xil ka qaadid toos ah midna Madaxweynaha ma sameyn karo.
Sharci ahaan, Madaxweynaha JFS ma qaadi karo tallaabo aan uga imaan hay’adaha Sharcidejinta, Fulinta, iyo Garsoorka. Waajibka Madaxweynaha waa inuusan ku xadgudbin, faragelin xilgudashada hay’adaha dastuuriga ah oo mid walba leedahay waajibaad u gaar ah. Wax ka qabadka takrifalka awoodda dowladda waxaa u xilsaaran hay’adaha sharci fulinta (Law Enforcement).
Qoraalka Fahad Yaasin wuxuu daaha ka qaaday aragtida xukunka keligi talisnimada oo awoodda siyaasadda lagu helayo xoog iyo khiyamo,, laguna haysanayo cabsigelin, argagixisinnimo, iyo ku tumashada xorriyada muwaadininta; boobka, carqaladeynta, iyo musuqmaasuqa doorashada; adeegsiga Ciidammada Qalabka Sida, brobaganda, iyo jaahwareerinta bulshada.
Fahad Yaasin ma aaminsana in nabadda, xasillonida, iyo horumarka Soomaaliya ku xiran yihiin ilaalinta dastuurka, sharciga, qabashada doorashada xorta iyo xalaasha ah waqtigeeda, iyo ku dhaqanka mabaadi’da maamul wanaagga dowladnimo sida ku xusan qodobka 4 (1) oo leh xukuumadda waxay u hogaansameysaa dastuurka oo hagaya hal abuurka (initiatives) iyo go’aammada siyaasadeed (policy decisions) ee qaybaha dowladda.
Fahad Yaasin kama faa’ideysan daraasadda qiimaha badan ee Cilmi Baare Professor Maxamed Ingiris ka qoray hay’adda NISA si dhallan rog loogu sameeyo, daraasaddaaso soo baxday bishii Abril 2020, cinwaakeeduna yahay:
“Predatory politics and personalization of power: The abuses and misuses of the National Intelligence and Security Agency (NISA) in Somalia.” Siyaasadda dhaca ah iyo shakhsiyaynta awoodda: Ku-takri-falka iyo Si Xun U Isticmaalka Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) ee Soomaaliya.”
Nasiib darro ah, halkii la sugayay in Fahad Yaasin NISA ka fogeeyo, ka dhaqo NISA cusub gaboodfalladii iyo magacxumuadii caanka ku noqotay NSS tii hore, wuxuu muujiyay hilowga uu u qabo in NISA da cusub la mid noqoto NSS tii sababta u aheyd burburka qarankii Soomaaliyeed 1991.
Qoraalka Fahad wuxuu caddeyn u yahay in laga bilaalo 2017kii, dowladda Federaalka ee Madaxweyne Farmajo hogaaminayo ay ka leexatay dariiqa toosan ee dimoqradiga ah, dariishada ka tuurtay ku dhaqanka dastuurka lagu doortay, ayna cagta saartay wadddada keligi talisnimada, afduubkaas sabab u ah qalalaasaha dabadheeraday, fashilka doorashada muddo dhaafka ah, iyo dhiig baxa iyo welwelka laga qabo burburka dowladda Soomaaliya.
Saamileyda (Jilayaasha) siyaasadeed oo aan aqoonsaneyn, aaminsaneyn dastuurka dalka, lalama geli karo wadaxaajood siyaasadeed ee danta dadka iyo dalka looga wada hadlayo,, isla markaana lama aqbali karo xukunkooda. Sidaa darted, waxaa waajib ah in waxgaradka Soomaaliyeed kacaan si ay u fashilayaan aragtida halista ah ee keligi Talisnimo ee qoraalka Fahad Yaasin Xambarsan yahay, Soomali badanna lagu marin habaabiyay. Waa degdeg loo baabi’iyo hay’adda NISA si loo dhiso hay’ad waafaqsan mabaadi’da dastuurka kmg.